Lockdown kpalitere njem egwuregwu na-eme eme eme na Newbury Greenham Business Park
VENUE VR bụ igwe ọhụụ arụrụ ọhụrụ ọhụụ dị na Greenham Business Park. Ọ meghere na mbido Ọktọba ma na-enyezi usoro mmemme maka ndị simulators na ndị na-anụ ụtọ VR. Companylọ ọrụ ọhụrụ a bụ njedebe nke onye mmemme kọmputa Matthew McMahon nke Newbury, onye kpebiri tr ...
200 × 200 Efere Mgbidi Efere
Taịlị bụ ebe a ma ama maka mgbidi na ime ụlọ ịwụ ahụ, ma nwee ike iweta ụcha, ụkpụrụ, ederede, ọdịdị eke na ọbụna amara. Ntuziaka anyị na-ahọrọ taịl nile nke ụlọ ịsa ahụ ga-eme ka ị hụ na ị ga-ahọrọ taịl kachasị mma maka ohere gị Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma otú ị ga-esi ahọrọ taịlị ime ụlọ ịwụ maka akwa batroo ọhụrụ ...
Ndozi ime ụlọ nke onye nwe ụlọ na Hebei Yanjin
Ndị nkwado ndị nkwado patch na-akwado nkwado a. Echiche ndị e gosipụtara n’isiokwu a bụ nke onye dere ya. You na-atụle imelite ime ụlọ ịwụ nke ụlọ Massachusetts? Tupu ịmalite ime mkpebi banyere nrụzigharị, gịnị ma ị tụlee itinye ụfọdụ enyi na gburugburu ebe obibi ...
Ọnụ ọgụgụ ahịa ahịa seramiiki zuru ụwa ọnụ na 2020, ohere ọhụụ, atụmanya asọmpi na nyocha COVID-19 na 2026
“Mmetụta nke Covid-19 na seramiiki na-akọ akụkọ ụlọ ọrụ, 2020 ″ agbakwunyere na ngwaahịa nxtgenreports.com. Akụkọ 2020 Tiles bụ akwụkwọ nyocha nwere data zuru ezu enwere ike iji mee ihe iji kwalite ma nyere aka nyochaa akụkụ niile nke azụmahịa taịl ...
2020-2025 ụwa na mgbidi taịl nile na-ebu amụma amụma ọganihu, echiche mpaghara
Na. agbakwụnyela ọmụmụ zuru ezu banyere "ala na mgbidi tile tile", na-edepụta ọkwọ ụgbọala ahịa ọ bụla n'ụzọ zuru ezu, ma na-eduzi nyocha dị mgbagwoju anya nke azụmahịa ndị kwụ ọtọ. Nchọpụta a "ala na mgbidi taịliki" a ga-enyere aka ịchọta ohere azụmaahịa ọhụụ ma dozie mar ...
Kacha mara mma bee na taịl nile, nke nwere ike kwalite ozugbo
Ihe osise eserese nwere ebe ha ga-esi na kichin na ime ụlọ ịwụ ahụ. Agbanyeghị, maka ụlọ ịsa ahụ a na-ahụkarị 5 × 8 ụkwụ, nkezi ọnụahịa nke ihe tile na ntinye dị n'etiti US $ 1,000 na US $ 1,500, yabụ ịkwalite ala na taịlị eji achọ mma nwere ike iri ngwa ngwa mmezi gị. Ugbu a, yo ...
Fabbrica Marmi e Graniti malite ise marble-mmetụta n'ala taịl dezeen-logo dezeen-logo
Nkwalite Dezeen: brandtali Fabbrica Marmi e Graniti (FMG) nke Italiantali ewepụtala taịlị marble ise, nke ejiri ekpuchi elu na arịa ụlọ. Ceramic taịl nile bụ akụkụ nke FMG's MaxFine usoro nke nnukwu-format seramiiki stoneware, nke a na-kpọmkwem iji maka azụmahịa na hom ...
43 dị ọnụ ala ma nwee ọgụgụ isi nke ga - eme ka ụlọ gị nwekwuo mmasị
Ka ị na-etinyekwu oge n'ime ụlọ, ị nwere ike ịchọta onwe gị ịchọrọ ime ka ohere gị dị ntakịrị ntakịrị. Ijide n'aka na ụlọ gị na-ekpo ọkụ ma na-anabata gị, ọkachasị maka gị, dị mkpa mgbe niile. A sị ka e kwuwe, ị na-etinye oge dị ukwuu ebe a.) You nwere ike ịmalite ime ka ebe obibi gị dịkwuo elu site na ịzụrụ ụfọdụ ọnụ ala ...
N'ime akụkọ na-edozi Obama White House
Enwere ndị ahịa na-atụ nrọ, ma otu ezinụlọ na-eto eto, Michael S. Smith nyeere ha aka idozi na 1600 Pennsylvania Okporo ụzọ na 2009. Ọ bụ onye nrụpụta ime ụlọ agadi. O jiri usoro nke njikọ na ntanye iji nabata ajụjụ ọnụ iji hazie Obama White House. Kismet. Agbanyeghị, ọ kwụsịghị ọrụ ...
Tubelined Ceramic Taịl
Luke na-aza ajụjụ ndị na-agụ akwụkwọ banyere ụdị na ejiji na kwa izu. Email ya na lukeedward.hall@ft.com ma soro ya na Instagram @lukeedwardhall Amalitere m taịlị iji melite ụlọ ịwụ ahụ. Nhọrọ ahụ karịrị akarị, mana m na-enwe obi ike. Ime ụlọ ahụ pere mpe, ya mere achọghị m ...
Moody's: N'ihi COVID-19, mgbanwe nke ngwaahịa na-eduga n'ịbawanye ụgwọ ụlọ ọgwụ
Soro anyị site na Nọvemba 9th ruo 11th iji mụta ka telemedicine siri gbanwee mgbanwe nke ndị ọrụ ahụike na ọdịnihu nke Moody kwuru na usoro ụlọ ọgwụ agaghị akwụ ụgwọ naanị ụgwọ dị elu maka ngwa nchekwa onwe onye na ọgwụ ndị ọzọ, kamakwa ụgwọ dị elu maka ọha na eze. ..
Mepụta onyinye pụrụ iche na ncheta dị oke ọnụ na obi nke Robbins 'Crafter's
Nne na nwa nwanyi, na acho ndi di na nwunye ibikọ, ihe omume nke ulo akwukwo, emume ncheta omumu umuaka, ezinulo ezinulo, na obuna agbam akwukwo; n'ezie, onye ọ bụla na-achọ ihe ọchị, na-eji aka mee, onyinye pụrụ iche na ihe ncheta. Crafter's HeArt Studio na Binz. Ha hapụrụ ihe bara uru ...